Tartanka Qur’aan akhris ah oo lagu xalay lagu qabtay Fiisho Governo -Sawirro – Radio Muqdisho
Tartanka Qur’aan akhris ah oo lagu xalay lagu qabtay Fiisho Governo -Sawirro
Aqalka dowlada hoose ee Xamar ayaa lagu soo gabagabeeyay tartan qor’aan akhris ah oo maalmahan socday kaas oo lagu maamuusaayay bisha barakeysan ee Ramadanka ayaa waxaa loo qabtay arday ka socotay 17ka degmo ee gobalka Banaadir waxaana tartankaasi taabagalinaayay maamulka gobalka Banaadir.
Munaasabadii lagu soo xireyay tartanka waxaa ka qeybgalay wasiiro iyo xilibaano ka tirsan dowlada Soomaaliya, guddoomiyaha gobalka Banaadir ahna duqa Muqdisho qaar kamid ah culimada Soomaaliyeed,guddoomiyeyaasha degmooyinka iyo xubno ka socday ururda bulshada rayidka ah iyo marti sharaf.
Arday ka socday degmada Yaaqshid ayaa ku guulestay kaalinta koowaad waxaa kaalinta labaad galay arday ka socday degmada Wadajir halka kaalinta sdexaad ay gashay degmada Dharkenley waxaana, tartankan qur’aan akhriska ah loo qabtay arday da’adooda ku hooseyso 15 jir.
Sheekh Bashiir Axmed Salaad oo ah guddoomiyaha hay’adda culimada Soomaaliyeed ayaa ka hadlay fadliga uu leeyahay in la xifdiyo Qur’aanka kariimka.
Wasiirka wasaarada warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumada Soomaaliya mudane Maxamed Cabdi Xayir (Maareeye) oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in macalimiinta malcaamadaha Qur’aanka kariimka looga baahan yahay in ay ardayda baraan dhibaatada ay leedahay ku talaxtagga diinta laguna dadaalo wadaniyadda.
Guddoomiyaha gobalka Banaadir ahna duqa Muqdisho mudane Yuusuf Xusen Jimcaale (Madaale) waxa uu sheegay in tartankani uu yahay mid lagu horumarinaayo barashada Qur’aanka kariimka.
Markii ay soo gabagaboday Xaflada xiritaanka ah ayaa waxaa abaalmarino lagu doonsiiyay tartamaashi kaalamaha hore ka galay iyo gudoomiyeyaasha degmooyinka, sidoo kale waxaa bilad sharaf la guddoonsiiyay duqa magaalada Muqdisho oo tartankani tabagaliyay.
Tartamayaasha degmada Boosaaso oo kaalinta 3aad ee tartanka soo gashay “SAWIRRO”
Maxkamadda Sare Sacuudiga oo ku baaqday in galabta la fiiriyo bilashada bisha Shawaal